डाँ’का शैलीमा जर्नेलको घर छिर्ने हिमालाई पनि मुद्धा ! आफै न्यायादिश बनेर अर्काको घर जाने अधिकार छ ? (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/डाँ’का शैलीमा जर्नेलको घर छिर्ने हिमालाई पनि मुद्धा ! आफै न्यायादिश बनेर अर्काको घर जाने अधिकार छ ? (भिडियो सहित)
डाँ’का शैलीमा जर्नेलको घर छिर्ने हिमालाई पनि मुद्धा ! आफै न्यायादिश बनेर अर्काको घर जाने अधिकार छ ? (भिडियो सहित)
गत बिहीबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रमुख इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी (जर्नेल) को बचाउमा लागेर बच्चा बोकेकी हिमा श्रेष्ठमाथि ला’ठी बर्सियो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त भिडियो पश्चात इन्सपेक्टर पौडेल निकै आलोचित भएका थिए ।
बच्चा बोकेकी महिला हिमा श्रेष्ठमाथि जथाभावी ला’ठी हा’न्ने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को जिम्मेवारी समेत खोसिएको छ । केहि दिन अगाडी महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीको नेतृत्वमा कार्यरत इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले हिमालाई कु’टेको भिडियो भाइरल भएपछि विभिन्न व्यक्तित्वले आफ्ना धारणा पनि राखेका थिए ।
यसै बिषयलाई लिएर अधिवक्ता विजय कुमार बस्नेतले पनि आफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका छन् । अरुको घरभित्र अनाधिकार रुपमा महिलाको जमात प्रवेश गर्नु कानुन अनुरुप चो’री ठहरिने र हिमा र अन्य महिला हेम खत्रीको घरमा प्रवेश गरेर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरि गलत प्रवृति देखाएको पनि उनले बताएका छन् ।
प्रहरीबाट पनि गल्ति भएको तर त्यहाँ भएको गतिबिधिको बारेमा पूर्ण स्पष्टता नहुँदा घटना साम्य पार्न प्रहरीले त्यस्तो कदम उठाउदा आफ्नो कर्तव्य निभाएको उनले बताएका छन् । पढाउनु पर्ने बेलामा नाबालक बच्चा बोकेर हिड्ने हिमा श्रेष्ठ आफैले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको उनले बताएका छन् ।
कसैको अधिकारको लागि बोल्दा अरु कसैको अधिकारको हनन गर्न नपाईने उनको तर्क छ । नेपालको बिध्यमान कानुन अनुसार अगाडी बढेको भए न्यायोचित हुने थियो भन्ने पनि उनको भनाइ छ । हिमा आफै न्यायादिश बनेर अर्काको घर जाने अधिकार छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । अधिवक्ता बस्नेतसँग गरिएको बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस् :
समयमै समय बदलिन्छ तर मानिस कहिले बदलिन्छ थाहा हुँदैन । आफू रुँदै जन्मेर अरुलाई रुवाउँदै मर्ने जात हो मान्छे । दु:ख होइन, परिश्रम गर्ने हो, सुख र मनोरन्जन त क्षणिक मात्र हुन्छन् । यदि प्रेममा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी तिमी ठहरिन्थ्यौ डियर ।
प्रेम भनेको ताल्चा र चाबी जस्तो होस्, ताल्चा नभए चाबी नखुल्ने र एउटा ताल्चाले अर्को चाबी खोल्न नमिल्ने । अपनाउनका लागि हजारौँ खुबी कमी हुने गर्दछ तर छोड्नको लागि एउटा गल्ती नै काफी हुँदो रहेछ ।
१) धन नष्ट हुन्छ, सौन्दर्य विलीन हुन्छ, जीवन तेजसँग समाप्त हुन्छ,शक्ति लुप्त हुन्छ तर देश लागि तिमीले गरेको योगदान अजर र अमर रहनेछ । त्यसैले म वा मेरो होइन हामी नेपाली भनौ , नेपाली बनौँ सम्हालौँ नेपाल मुल्याकंन एक दिन अवश्य हुनेछ ।
२) आत्मगान होइन राष्ट्रगान गर्न पाउ, राष्ट्रकै लागि बाच्न र बलिदान दिन पाउ ।
३) समाजमा भ्रान्ति छरेर निर्दोष लाई दोषी बनाइन्छ निर्दोष वचनका छर्राहरु सहेर पनि आफ्नो विजय हुने दिन यही कुराले मन बुझाएर प्रतीक्षा गरेका हुन्छन् । “सत्य र सूर्य लुकाएर लुक्दैनन्’
४) बदला लिएर होइन बदलिएर देखाऊ !
५) आफन्त तिनै हुन जसले प्रतिकूलतामा पनि कहिले साथ छोड्दैनन्
६) राम्रो समयको प्रतीक्षा नगर्नुस् बरु समयलाई राम्रो सँग प्रयोग गर्नुहोस् सफलता अवश्य मिल्नेछ ।
७) राम्रो समयको प्रतीक्षा नगर्नुस् बरु समयलाई राम्रो सँग प्रयोग गर्नुहोस् सफलता अवश्य मिल्नेछ ।
८) कोही गरिब भोको नरहोस् भनी भगवान् त मूर्ति बनी बेचिनुहुन्छ भने हामी त मानिस हौ त्यसैले कसैको दुखमा हाँसेर मुख दर्शक बन्नुभन्दा एक अर्काको दुखको सहयात्री बनौँ ताकि यस संसारमा कोही दुखी देख्न नपरोस् !
९) यस संसारमा मानिसलाई जन्म दिन जति गाह्रो छ त्यो भन्दा गाह्रो छ मान्छे भएर जिउन ।
१०) कोही गरिब भोको नरहोस् भनी भगवान् त मूर्ति बनी बेचिनुहुन्छ भने हामी त मानिस हौ त्यसैले कसैको दुखमा हाँसेर मुख दर्शक बन्नुभन्दा एक अर्काको दुखको सहयात्री बनौँ ताकि यस संसारमा कोही दुखी देख्न नपरोस् !
यति धेरै माया गर्ने एलिजाका बुवा, छोरीलाई बिहे गरेर अन्माउँन पर्छ भनेर बिहेमा आएनन्, नातिनीको एउटा हात नहुँदा धरधरी रोए बुवा (भिडियो)
पत्निले डिर्भोस मागेपछि आफ्नै बाबुले गरे दुई छोराको अप*हरण, पत्नि रुँदै मिडियामा (भिडियो)
नयाँ वर्षको दिनमा एउटी आमालाई पर्यो यस्तो बिपत्ती, १८ महिने छोरा बचाइदिनुस् भन्दै रुँदै गरिन् याचना (भिडियो हेर्नुस्)